I-PFM VS Zirconia: Yeyiphi imathiriyeli ebhetele? -News-VSmile Co., ltd
I-PFM VS Zirconia: Yeyiphi eyona nto ilunge ngakumbi?
Ixesha: 2021-01-08 I ngxelo:97
Ngokuphuhliswa kwetekhnoloji ye-CADCAM, i-zirconia iye yanda ngakumbi nangakumbi cos yaphucula ukuhamba komsebenzi kunye nokwenza lula ngokukhawuleza, iilebhu ezininzi ziyekile ukwenza ii-PFM ngoku.
"Uyilo, ukutshiza, utyalo-mali, ukudinwa, ukuvuna, ukugqiba isinyithi, ioksijini, ukubamba umoya, ukucofa ii-2x's, ingqokelela ye-porcelain, ukongeza, ukugqiba, ukubala, ukugcoba njl njl ... ndibengumbulali waselebhu ”utshilo u-Aaron“ Ayililo ikamva kwaye ngaphandle kwabo, iilebhu zethu zingangcono ”.
Kuyabonakala ukuba, njengomvelisi wezinto ze-cadcam zamazinyo, sicebisa i-zirconia ngaphezulu kwee-PFM, kodwa kufuneka usebenzise ntoni ekubuyiseleni ukuba awunazo izinto zokugaya, iiskena, iiprinta, kunye nezinye iitekhnoloji ezibizayo? Impendulo iya kuhlala iyi-PFM enokwenza ubugcisa ngeendlela ezingabizi kakhulu kodwa eziyindinisa.njengaseAfrika okanye kwamanye amazwe amaninzi, kuyakuhlala kukho intengiso yee-PFM.
Izithsaba ze-Porcelain-fused-to-metal (PFMs) zisetyenziswe ngempumelelo iminyaka emininzi, ukubonelela abagqirha ngokubuyiselwa okuthembekileyo, okuthandekayo, kunye nokubuyiselwa okuhlala ixesha elide. Nangona kunjalo, kule minyaka imbalwa idlulileyo, inani elinyukayo loochwepheshe bakhetha ukubuyiselwa kwe-zirconia. Inani le Izithsaba ze-PFM ezicelwe ngabezonyango zisezantsi xa kuthelekiswa nokubuyiselwa kwazo zonke i-ceramic kunye ne-zirconia. Abanye Oogqirha bamazinyo basebenzisa i-zirconia okanye ukubuyiselwa kwe-ceramic yonke ngokukodwa, ngakumbi xa kubuyiselwa iyunithi enye kuphela. Ukutshintshela kwesinye isixhobo kuye kwesinye kuye kwangoko, ngenxa yoko kukho uphando oluncinci lwexesha elide ekuthembekeni kokubuyiselwa kwe-zirconia. Ngokuthelekisa, ii-PFM zisetyenziswe ngempumelelo ngaphezulu kweminyaka engama-60, kwaye ukuhlala kwazo kuvavanywe kakhulu.
Izixhobo ezisetyenziselwa ukuvelisa iiPrM Crown
Ngokubanzi, kukho iindidi ezintathu ezahlukeneyo zealloys zamazinyo ezisetyenziswayo xa kusenziwa izithsaba zePFM: ezingabalulekanga, ezinqabileyo, kunye nezidumileyo. I-alloys ezingabalulekanga ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba ziziseko zesinyithi ezinomxholo obalaseleyo wesinyithi ongaphantsi kwama-25%. Ezi zinto zihlala ziba neepesenti ezinkulu ze-cobalt, i-nickel, i-chromium, okanye i-beryllium. Iialloys ezinqabileyo ezinemihlaba ubuncinci zinama-25% omxholo onesinyithi. Iialloys zentsimbi ezixabisekileyo zingaphezulu kwe-60% yomxholo wesinyithi obalaseleyo obandakanya igolide, iplatinam, okanye ipalladium. Ingxubevange yesinyithi exabisekileyo ine-40% yegolide. Amacandelo amancinci atyatyekwe ngefeldspathic porcelain.
Izinto ezisetyenziselwa ukuvelisa iZirconia Crown
Izinketho zezithsaba zirconia zibandakanya Zirconia HT ST, Zirconia UT, I-Zirconia Pre Shaded kwaye Zirconia zomaleko. I-Zirconia Solid yi-monolithic kwaye yeyona nto inamandla ekhoyo. Kulunge ngakumbi kwizigulana ezinengxaki yokugoba okanye yokusila kwaye kufaneleke kakhulu kwizithsaba zangasemva kunye neebhlorho. I-Zirconia UT yenziwe ngezinto ezinamandla kunokubuyiselwa kwe-PFM kodwa ine-translucency yendalo kunye ne-esthetics egqwesileyo. Zilungele izithsaba zangaphambili kunye neebhlorho ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezi-3. I-Zirconia Layered yenye yezinto ezinamandla kakhulu ezilungele iibhlorho nezithsaba. Lulwakhiwo lwayo yi-zirconia ene-porcelain ebekwe ngaphezulu kwayo kwaye iyafana ne-PFM.
Kutheni ukhetha ii-PFM?
Ukunyaniseka kokubuyiselwa kwe-PFM kubhalwe kakuhle, kwaye izigidi zokubuyiselwa zibekwe kwihlabathi liphela. Ii-PFM ziyaziwa ukuba zihlala iminyaka engama-30 xa zisetyenziswe kwiimeko ezichanekileyo kunye nococeko olululo lwesigulana.
Iimpawu zokubuyiselwa kwePFM:
· Ii-PFM zihambaOng kwaye zilungele ukusetyenziswa kuzo zonke iindawo zomlomo nakwiimeko ezininzi zeklinikhi
· Impumelelo yeklinikhi yokubuyiselwa kwe-PFM ibonakalisiwe ngophando lwexesha elide
· Uphando lwezonyango lubonakalisile ukuba izithsaba ze-PFM ezizodwa ziya kuhlala iminyaka emininzi, kwaye iibhlorho zeeyunithi ezintathu ze-PFM zikwanobomi obude
· Izithsaba ze-PFM kunye neebhulorho zibonelela nge-esthetics elungileyo, ngakumbi kwiminyaka embalwa yokuqala
· Ukuncamathela kokuchaneka kunokusetyenziswa nee-PFMs, ngelixa ukubuyiselwa kwe-zirconia kungekabufezekisi obu buchule
· Ukubuyiselwa kwe-PFM kunokusetyenziselwa iibhlorho ezinde kwaye kungqineke kulukhetho olusebenzayo lwezixhobo kwixesha elide
Iingxaki ezinokubakho ngokusebenzisa iiPFM Crown
Ngelixa ukuthembeka kunye nokuqina kwe-PFMs kungathandabuzekiyo, kunokuba nzima ukwenza ukubuyiselwa kwe-esthetic kakhulu ngenxa yentsimbi. Ulwakhiwo kufuneka lufakwe kwi-opaque kwaye inokuhlala ibonakala kancinci nasemva kokubekwa nge-porcelain. I-Opaque ikwathintela ukukhanya ukuba kungadluli ekubuyiseleni njengoko kuya kuba njalo ngezinyo lendalo. Enye ingxaki enokubakho ekubuyiselweni kwe-PFM kukudodobala kweentsini. Ixesha elingaphezulu, njengoko izicubu zeentsini zibuyela umva, umda wentsimbi we-PFM uyabonakala, kudala umgca onombala ongwevu ongathandekiyo. Enye indlela yokoyisa le ngxaki kukusebenzisa umda we-porcelain, kodwa oku akunakuhlala kusisisombululo esisebenzayo. Izithsaba ze-PFM zityatyekwe nge-porcelain ye-feldspathic, enezinto ezibuthathaka ezinxibe amazinyo aphikisanayo ngeqondo eliphezulu kakhulu. Oku kunokuba yingxaki xa ubuyisela amazinyo kwii-bruxers.
Kutheni ukhetha ukubuyiswa kweZirconia?
Ukubuyiselwa kwe-Zirconia kunika oogqirha izibonelelo ezininzi, kwaye ukwaziswa kwe-zirconia entsha kunye ne-esthetically ekholisayo kuye kwandisa kakhulu isibheno sabo. Uninzi lweeklinikhi zikhetha ukuskena amalungiselelo ezinyo kunokuthatha ukubonwa kwetreyi eqhelekileyo. Iilebhu zamazinyo zisebenzisa izikena ukwenza ulungiso olwenziwe ngokuchanekileyo ngokulula.
Iimpawu zokubuyiselwa kwe-zirconia:
· Izinto eziphathekayo zibonelela ngamandla
· Ukuhambelana okuphezulu kwe-zirconia ngekhe kubangele ukungazinzi kwizigulana ezinokungalungelelani nokubuyiselwa kwe-PFM
· Banokuphendula ngezicubu ezintle kwaye ziluncedo kwizigulana ezinesiphako esibuhlungu ezibangelwa yi-PFM okanye ukubuyiswa kwesinyithi
· Ukubuyiselwa kulungelelaniswe ngokuchanekileyo, ke imida ichanekile ngokugqibeleleyo
· Zikulungele ukubuyiselwa kwesithsaba esipheleleyo apho izithambiso zibalulekile kwaye ukongezwa kwamandla kunye nokuzinzileyo kuyafuneka
· Ziyakwazi ukumelana nobushushu kunye nengqele, nto leyo enciphisa ubukhali
· Ukulungiswa kwamazinyo okuncinci kuyafuneka
· I-zirconia eqinileyo ilungele ii-bruxers ngenxa yokuqina kwayo
· Banokufihla ukutshintsha kombala wamazinyo, ukufakelwa kwezinto ezingafunekiyo kunye neentsimbi
· Ukudodobala kwentsini akuyi kuchaphazela i-esthetics, kwaye ukupheliswa kombala okucekeceke kuya kuthintelwa
Ukuqwalaselwa Xa Usebenzisa iZirconia Ukubuyiselwa
I-Zirconia yinto entsha kunye nezifundo ezimbalwa ezenziweyo ngokubhekisele kubude bayo, kodwa ukwaziswa kweefom ezintsha zirconia kushenxise uninzi lweenkxalabo zeeklinikhi ezazikho ngaphambili. Ngaphambili, iifom zantlandlolo ze-zirconia bezingenako ukuguquguquka kokubuyiselwa kwe-lithium disilicate. Ngokuthelekisa, i-zirconia yanamhlanje ngoku inokudala obona bomi bufana nokubuyiselwa, kwaye amandla ayo enza ukuba ibe lukhetho oluphezulu kwiimeko ezininzi. Kufanelekile ukubuyiselwa kwangaphambili nangaphandle kwaye apho ii-esthetics zezona zixhalabisayo.
Enye inkxalabo kukuba ukuzinza kwale nto kwenza ukuba kube nzima ukubona ukubola phantsi kwesithsaba, kodwa ukubuyiselwa kwenziwa ngokuchanekileyo kusetyenziswa itekhnoloji ye-CADCAM,ukunciphisa ithuba losulelo.
Kwixesha elidlulileyo, oogqirha baye babuza ukuba iiporcelains ezisetyenziselwa ukubeka i-zirconia zilungele ukukhutshwa. Imiba yomngcipheko wokuqhekeka ibandakanya i-bruxism kunye nokungahoyi ukunxiba unogada wasebusuku. Ukuqaliswa kwe-zirconia eqinileyo ethandekayo efanelekileyo kulungiselelwe ii-bruxers kulungisiwe kwezi nkxalabo. Ngapha koko, i-zirconia eqinileyo lolona khetho lufanelekileyo ngakumbi kwii-bruxers kunee-PFM.
Ukuza kuthi ga ngoku, ubungqina beklinikhi bexesha elide lokusinda kwe-zirconia esekwe ekubuyiseleni kulunge kakhulu, nangona ukwaziswa kwezinto zeteknoloji esekwe phambili zirconia kule minyaka imbalwa idlulileyo ikwenze kwanzima ukuvavanya ngokufanelekileyo. Izifundo ezizayo zibonisa ukuba ezi ntlobo zirconia zintsha zivelisa iziphumo zexesha elide. Izigulana ziya zifuna ngakumbi ukubuyiswa okuhle, kwaye kulula ukulungiselela ezi mfuno xa usebenzisa i-zirconia.
I-PREV: Uyikhetha njani i-Lab yeWebhu
OKULANDELAYO : Iingcebiso zokuFakelwa kweVsimle Bur
Vsmile HappyZir Khangela akukho nto